Iskuulka 21-ka Janaayo oo dib loo howlgeliyay (DAAWO MUUQAAL) – Radio Muqdisho
Munaasabadaan oo ay ka qeyb galeen Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada, ergeyga gaarka ah ee Midowga Yurub ee Soomaaliya iyo mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Gobolka Benaadir, isla markaana xarigga looga jarayay iskuulka 21-ka Janaayo ee degmada C/casiis ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Iskuulkan oo dhawaan dib u dayactir ay ku sameeyeen Midowga Yurub ayaa loogu talagalay in wax lagu baro carruurta ku nool demada C/casiis iyo deegaannada kale ee ku xeeran.
Guddoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda ee maamulka Gobolka Benaadir Maxamad Aadan Guuleed Caano Geel oo goobta ka hadlay ayaa u Mahad celiyay Midowga Yurub kaalinta ay ka gaysteen dhismaha dugsiga 21-ka Janaayo oo baahi wayn ay u qabaan bulshada ku nool degmada C/casiis.
Wakiilka Midowga Yurub ee Soomaaliya Danjire Michele Cervone d’Urso oo isna kulanka hadal ka jeediyay ayaa sheegay inay sii wadayaan taageerada ay siinayaan shacabka iyo dowladda Soomaaliya.
Wasiirka Waxbarashada iyo bar baarinta ee xukuumadda Soomaaliya mudane Ciise Maxamed Axmed Guraase oo xarigga ka jaray iskuulka 21-ka Janaayo ayaa ka codsaday shacabka iyo maamulka degmada C/casiis in ay ka wada shaqeeyaan dhiirigelinta waxbarashada carruurta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool degmada Cabdicasiis ee Gobolka Benaadir.
Jaaliyadda Soomaaliyeed Ee Norway Oo Deeq Raashin Ah Gaarsiiyay Dadkii Ay Saameysay Fatahaadii Beledweyne "Sawirro"